Global Voices teny Malagasy » Ampahafantarina anao i Charlie Uruchima, mitantana ny @ActLenguas mandritra ny herinandron’ny 24-30 Jona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Jolay 2019 17:32 GMT 1	 · Mpanoratra Luis Flores Martínez Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Mediam-bahoaka, actlenguas
Sary natolotr'i Charlie Uruchima
Ho an'ny 2019, nanasa maromaro mba hampiantrano ny kaonty Twitter  @ActLenguas  izahay, mba hizara ny zavatra niainan-dry zareo ho fanomezana aina vao sy ho fampiroboroboana ny fitenindrazany. Ao anatin'ity lahatsoratra fanolorana ity, fantaro misimisy kokoa ny momba an'i Charlie Uruchima (@kichwahatari ) sy izay vinavinany horesahana mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy..
RV: Lazalazao anay ny momba anao:
Charlie Uruchima no anarako. Teraka sy lehibe tao New York, manana fiaviana kichwa-ekoatoriàna. Fianarana teny amin'ny oniversiten'i New York no nahaizako ny fiteny quechua/kichwa ary niasa niaraka tamin'ireo vondrom-piarahamonina quechuas/kichwas teny an-toerana, tao New York. Ny niarahana niasa tamin'ny vondrom-piarahamonina Kichwa tao New York no nitarika ahy hiaraka hanagana ny tetikasa onjampeo Kichwa Hatari tamin'ny volana Jolay 2014. Nanomdoka teo, afaka niasa taminà sehatra samihafa ny Kichwa Hatari (@kichwahatari) : sosialy, zavakanto, momba ny fiteny, kolontsaina, ary ny rariny sosialy. Anisan'ireo tetikasa azo marihana, ndeha hotanisaintsika ny fandaharana isankerinandro mandeha anaty onjampeo Kichwa Hatari, May Sumak, Kichwa Yachay sy ny Runa Ñawi.
RV: Ny toerana misy ny fiteninareo amin'izao fotoana izao, eny anaty sy ivelan'ny aterineto?
Ny Kichwa Hatari no tena loharano ahatazanana ny Kichwa hatramin'ny nametrahana ny fandaharan'ny onjampeonay ho ety anaty aterineto. Niasa toy ny tetezana ihany koa ny aterineto mba hampitohy ireo zanaka am-pielezana Kichwa any amin'ireo firenena toa an'i Ekoatora, Chicago, Wisconsin, sy New York.
RV: Ny lohahevitra kasainao hifantohana mandritra ny herinandro itantananao ny kaonty @ActLenguas?
Herinandro goavana ho an'ireo zanaka am-pielezana kichwa manerana izao tontolo izao ity herinandro ity satria herinandron'ny ‘solstisy’ misy ny andro lava indrindra, na Inti Raymi. Hajaina any amin'ireo toerana toa an'i New York efa ho ampolo taona mahery izao ny Inti Raymi. Horesahanay ary ho ampahafantarinay amin'ny alalàn'ilay kaonty io tantara io.
RV: Inona no tena nandrisika anao ho lasa mpikatroka nomerika ho an'ny fiteninao? Inona no nofinofinao ho an'ny fiteninao?
Fenitra iray iraisampirenena ny fikatrohana nomerika. Mba hanetsehana ny ambaindain'ìreo vondrom-piarahamonina dia nanana ny fikatrohany nomerika daholo ireo hetsika sosialy isankarazany. Izany ihany koa no nofinofinay amin'ny mahaEKichwa Hatari, ary izaho manokana, dia ny mba hahafantarana ny tennay sy hanomezana hery azy eny anaty sehatra isankarazany eny, sy any anaty habaka mety ho tratran'ireny hafatra nomerika ireny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/06/141292/
 nanasa maromaro mba hampiantrano ny kaonty Twitter : https://rising.globalvoices.org/lenguas/2019/01/16/campana-rotativa-de-un-ano-en-twitter-difundira-las-voces-de-50-activistas-digitales-de-lenguas-indigenas/